TIKNOOLOJIGA BEERAHA EE RASPBERRIES SII KORDHAYA EE BANNAANKA U FURAN: BEERTO IYO DARYEELKA - RASPBERRY SII KORDHAYA
Xannaanaynta miraha ee beerta: talooyin waxtar leh
Raspberry uma baahna daryeel gaar ah isla markaana si dhakhso ah ayuu u siinayaa miro.
Sidaa darteed, qof kasta oo degan xagaaga ayaa ku beeran kara geedkaan dhulkooda. Intaa waxaa dheer, berry ay u sameeyaan macaanka delicious iyo tinctures.
Laakiin goorta iyo meesha lagu beero, sida loo daryeelo - waxaynu sii ogaan doonnaa dheeraad ah.
Goorta la beero raspberries
Iyadoo ku xiran gobolka, duurka raspberry waxaa la beeray karaa dayrta iyo gu'ga. Dayrtu waxay ku habboon tahay gobollada koonfureed, sababtoo ah waxay ku haysay heerkul fiican waqti dheer. Guga waa xilliga saxda ah ee degaannada leh qaboobaha hore iyo qaboobaha, ka dibna baadiyaha waxay yeelan doontaa wakhti ay ku qaadato xidid, dego oo aan barafoobin.
Miro-beereedka xilligan ee sanadkan wuxuu ka fiican yahay bartamihii April ilaa May. Waxaa lagugula talinayaa inaad haysatid waqti ka hor inta aanad bilaabin furitaanka. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku xiran tahay heerkulka hawada.
Koonfurta ee waqtigan waxaa laga yaabaa in horay u kulul, iyo sidaas darteed guga waxaa ka wanaagsan in aan ku beeri raspberries halkan, sababtoo ah rhizomes si fudud uma hayso waqti ay degaan, iyo baadiyaha bilaabi doonaa gaysashada. Warshadu ma hayso qoyaan iyo nafaqo ku filan, wayna dhiman doontaa.
Gobollada waqooyi waxay ku habboon yihiin beeritaanka guga - qoyaanku waa la joogteeyaa waxayna socotaa ilaa iyo inta uu dhirta u baahan yahay aasaasida.
Waa muhiim! Guga, geedo waxay qaadan doonaan xidid wakhti dheer ah, sida geedka horeba u bilaabay inuu siiyo caleemo. Sidaa darteed, waxay bilaabaan inay degaan sida ugu dhakhsaha badan dhulku boodboodo, haddii barafku aan la filaynin inuu soo noqdo.
Kuurada waa in la gooyaa, oo ah, si loo soo saaro caleemaha ilaa burooyinkeeda, ilaa ay bilaabaan inay si firfircoon u koraan oo ay nafaqooyin u qaataan naftooda. Caleemaha qudhooda waa in aysan aheyn mid qaro weyn, waxaa fiican in la qaado geedo leh laba qof oo koray iyo bislaaday.
Horaantii Sebtembar waxaad deganaan kartaa. Waxaa fiican in la bilaabo todobaadyo ka hor inta aan la filayn in lagu keydiyo ciidda, laakiin aan ka badneyn nuskii Oktoobar.
Waxaad xiiso u yeelan doontaa inaad wax ka barato agrotechnology-kicinta noocyada kala duwan ee raspberry sida "Beglkanka", "Taganka", "Maroseyka", "Vera", "Bryansk Divo", "Monomakh's Hat", "Giant Moscow", "Patricia", "Bell" , "Tourmaline", "Senator", "Glen Ampl", "Beauty of Russia".
Waxay qaadan doontaa hal sano oo geedi socod ah oo ah burooyinka basal. Waxay ku koraan oo ay xidid ku yeesheen dhulka. Waxay u baahan yihiin in si taxadar leh looga saaro dhulka, gooyaan geedi socodka dheer ee nidaamka xididka iyo ka saar kuwa kuwa dhaawacmay.
Si loo go'aamiyo diyaargarowga baadiyaha ah ee beerto waxay noqon kartaa sida soo socota: caleemaha waxay bilaabaan inay dhacaan, baadiyaha waxay istaagaysaa sii kordhaya, iyo burooyinkuna waxay udhaxaan xididada yaryar.
Xaggee laga beeraa goobta
Xawaareynta sawirada iyo dhalidda waxay ku xiran tahay xulashada goobta goobta soo degta. Goobta iftiinka ah ayaa ugu fiican, laakiin ma madhan. Halkaa waxaa jiri doona geedo ama duurka kale oo badbaadin kara rasaasta dabaylaha xooggan. Dooro aag inta badan lagu daboolo barafka jiilaalka.
Tani waxay lagama maarmaan tahay in la hubiyo in nidaamka xididku u adkeysan karo xitaa marka uu dhaxan yahay -30 ° C. Lakabka woqooyi ayaa si dabiici ah u kululaya geedkan.
Baro shuruucda aasaasiga ah ee beerto miraha, sida loo sameeyo si sax ah guga iyo dayrta.
Isla mar ahaantaana, hubi in biyaha dhulka aysan joogin meeshan - inkastoo uu dhirta jecel yahay ciidda qoyan, waxay si dhaqso ah uga jajabinaysaa qoyaanka badan.
Qiyaastii beeritaanka gabal beeleed waa inaysan aheyn cadaan - baradho, yaanyo, strawberries. Xeerkani wuxuu khuseeyaa kuwa horay u soo maray ee geedka. Way ka fiican tahay haddii ay jireen duurka miro ama khudaar kale ka hor raspberry on goobta la doortay, laakiin ka dib markii ay bacrimiyey ciidda, ama si dabiici ah nasto iyo heshay xubno muhiim ah.
Waa muhiim! Mid ka mid ah raspberries ayaa siin kara goosashada wanaagsan ee aan ka badnayn 12 sano, ka dib markii taas waa in loo raro.
Waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo shuruucda noocaas oo kale ah:
inta u dhaxaysa duurka, ka tago ugu yaraan nus mitir, iyo sariiraha ku dhaji 2 mitir;
sidaas darteed ciidda ma qalalan, ku shub peat iyo sida balka ku xeeran baadiyaha, tani waxay kaa caawin doontaa haynin qoyaan;
ku dhaq xididdada raspberry biyo nadiif ah iyo ka dib laba saacadood oo biyo ah oo leh Bacriminta, sidaa daraadeed waxaad ku caawin doontaa in ay degto meel aanad waxna ku dhibin;
ha u isticmaalin daaweynta kiimikada ee duurka - berry ayaa si dhakhso ah u rusheeyaa oo soo saara walxaha waxyeellada leh;
hoosteeda ka dib markaad beerto waxaad u baahan tahay 5 litir oo biyo ah, laakiin isla markiiba ha ku shubin - way ka fiican tahay inaad tan sameyso maalinta oo dhan.
Haddii xeerarka oo dhan la raaco, ka dibna sannadka labaad ee nolosha ee berry ayaa soo muuqan doona. Waxa ugu weyn ee - xusuuso in goosashada ka dib laamaha gooyay.
Sida loo doorto geedo caafimaad leh marka aad iibsaneyso
Xeerarka lagu dooranayo geedo tayo leh:
Ha qaadin dhirta, xididdada taas oo lagu keydiyay xirmada, tani waxay keeneysaa in la gooyo iyo badbaadada ugu yar;
yar yar ee seedling, ka weyn ee fursadda in ay ku noolaan doonaa;
qaado geed ku leh 2-3 caleemo;
xididdadu waa inay qoyaan, iyada oo aan waxyeello haysan iyo meelaha la gooyo;
Mashiinka waa in uu ahaadaa mid adag, adag, oo aan wax khasaare ah haysan oo aan dheereyn;
iska ilaali iibsashada gacmaha - halkii aad ka heli lahayd noocyo saafi ah, waxaad iibin kartaa ciyaarta duurjoogta ah ama kaliya geed jirran;
Ha ka baqin inaad iibsato dukaamada, inta badan waxay si toos ah ula shaqeeyaan xanaanada beerta.
Baro noocyada kala duwan ee ugu wanaagsan ee lagu beeray dalka, oo ku saabsan wax ka mid ah xajmiga raspberries ee sii kordhaya, raspberries madow, raspberries Tibetan, raspberries remontant.
Ka hor inta aan la beeri waxay lagama maarmaan tahay in la nadiifiyo aagga cawska. Kuwii ugu khatarsanaa waa cawska, caleemaha, beerista yamaariga iyo daaqado kale oo leh barxad la soo saaray. Taas ka dib, waxaad sii wadi kartaa bacriminta carrada. Humus ee dhulka ka caawin doonaa raspberry ma aha oo kaliya in ay degaan, laakiin sidoo kale si aad u bixiso goosashada wanaagsan. Sidaa darteed, ka hor inta beerto aagga waxaa lagu beeray digada. Bacriminta macdanta ayaa sidoo kale la soo bandhigay, ka dib markii taas oo dalka lagu beeray qoto dheer oo ah 30 cm.
In dhul qoyan ku aas aaska duurka u collar xididka. Markaas warshad waa la gooyaa heerka ciidda.
Hababka soo dhicidda
Waxaa jira laba siyaabood oo loo dhajinayo raspberries oo ku yaala qulqulka - godadka iyo godadka. Habka labaad ayaa loo tixgeliyaa inuu waxtar badan yahay helitaanka goosashada wanaagsan. Isla mar ahaantaana, way adagtahay in la diyaariyo.
Dhowr usbuuc ka hor intaan la beero geedo, waxaad u baahan tahay inaad godo godad ku saabsan 40 cm ballaaran iyo 30 cm qoto dheer. Ha ilaawin inaad ka tagto inta u dhaxaysa godadka ilaa mitirka meel bannaan. Waa lagama maarmaan in la kala saaro lakabka sare iyo hoose ee ciidda la kariyay. Haddii dhulka la bacrimiyo si waafaqsan sharciyada oo dhan, ka dibna waxaan dabooli doonaa rhizomes oo keliya lakabka sare ee bidix.
Ma taqaanaa? Qoryihii ugu da 'weynaa ee laga helay Crete, waxay ku koraan qarnigii III ee BC. e.
Haddii dhulku aan hore loo beerin, ka dibna waad ku shubi kartaa compost si toos ah godka. Waxay qaadan doontaa 10 kg oo ah humus, nus kiilo ah ash alwaax, potassium sulfate iyo superphosphate 50 iyo 100 g, siday u kala horreeyaan.
Waxaan qodeynaa dabaqyo leh qoto dheer oo ah 40 cm iyo ballaciisu yahay 60 cm oo ah aag cagaaran oo qashinka ah, waxay noqon karaan inta aad rabto. Laakiin maskaxda ku hay in masaafada u dhaxaysa geedo waa inay ahaataa ugu yaraan 40 cm.
Waxaan hoos u buuxin karnaa compost ama digada dhulka oo aan ka yarayn 10 cm, ka dib oo aan buuxinno isla xadiga carrada ka kor. Lakabka Tani ee carrada ayaa ilaalin doona xididdada raspberry ka soo lakabka lakabka nafaqada.
Abuurka duubista hilibka: video
Waxaan ku beeri karnaa geedo hore loo diyaariyey, qoyan xididada, toosi iyaga oo dabooli dhulka. Waxaad fiirin kartaa haddii aad si sax ah u beertay: jiid jilicsan, haddii aysan si fudud u soo baxayn, marka wax walba waa sax.
Sida loo daryeelo raspberries
Raspberiyada ku yaal meeshi deg deg ah uma baahna daryeel gaar ah. Waana inaad marmarka qaarkood siiso fiiro gaar ah.
Si joogto ah u hubi carrada, haddii ay noqoto mid qalalan, ka dibna biyo baadhi. Maalin gaar ah oo kulul iyo abaaro, ku shub 40 litir oo biyo ah halkii mitir iyo dhowr jeer toddobaadkii - ilaa 30 litir. Qadarkaas biyuhu ma boobaan raspberries, laakiin waxay gaaraan nidaamka xididka iyo humus.
Waraabinta waa lagama maarmaan ka hor ubax, inta lagu jiro Bisaylkiisa ee berry iyo isla markiiba ka dib goosashada.
Nidaamka asaasiga raspberry wuxuu u baahan yahay hawo. Sidaa darteed, waxaan u baahan nahay si ay u xajistaan ​​oo u dabciyo duurka ka dib kasta waraabinta. Tani waa in la sameeyaa qoto dheer 10 cm oo u dhaw laanta lafteeda, iyo ilaa 15 cm inta u dhaxeysa sariiraha.
Si aad u qoyso si dhakhso ah uma tagin, mulching. Waxay kaa caawinaysaa yaraynta tirada biyaha ee seddex laaban. Topsoil daboolay balka ama peat.
Caleemaha waxaa laga yaabaa inay ku degaan dhulka sababtoo ah xaddi badan oo berry ah. Tani waxay keeni kartaa jebinta laanta iyo luminta beergooyska. Sidaa darteed, meel u dhow baadiyaha waxaad ku dhejin kartaa qoryaha alwaax, kaas oo sahlan in la xiro laanta.
Waxa kale oo aad ku rakibi kartaa posts 2 m kasta oo ku xir kabadhada. Inta u dhaxaysa miiqyada feerka waxay u baahan yihiin inay si taxadar leh qabsadaan caleemaha.
Si aan u buuxin raspberries leh kiimikooyinka, soo ururiyaan dambas - waxay awoodi doontaa in bacrimiya ciidda si fiican. Haddii aad diyaarsatay dhulka ka hor beerashada, markaa humus ballantu waxay socon doontaa ugu yaraan 5 sano.
Raspberries waxay bixiyaan caleemo beddelaad badan - ma dhalinayaan dalag, laakiin waxay ka qaadi doonaan nafaqooyinka. Tirada caadiga ah ee caleemaha duurka waa ilaa 7. Sidii caleemaha yaryar ayaa dib ugu soo noqdaan ilaa May, ka dibna tirada guud ee baadiyaha waxay koraysaa 10-20. Guga soo socda, xamaasad iyo burburay.
Baro sida loo habboon yahay dhoobada raspberries.
Talooyinka caleemaha ma midho dhalaan, sidaa daraadeed waxaa lagu jarjaraa 10 cm. Waxaad kordhin kartaa koritaanka laanta dhinacyada, haddii aad ku dhajiso dhererka ku saabsan mitir. Waxay sameeyaan xagaaga, iyo dayrta dhirta ayaa awoodi doona inay u diyaargaroobaan qabowga.
Haddii aad aragto in laamuhu ay bilaabaan inay dhacaan, caleemuhu waxay qalajiyaan - isla markiiba waa ka takhalusaan. Inta badan, tani waa cudur.
Haddii dhulku aad u dabayl yahay oo furan yahay, ka dibna way ka fiican tahay in lagu daboolo duurka iyagoo leh tarpaulin. Laakiin mararka qaarkood waxay u baahan yihiin inay neefsadaan. Raspberries beeray guga ayaa diyaar u ah inay la kulmaan qabowga. Xilliga dayrta, waxaa fiican inaadan dib u dhigin dhulka, haddii kale rhizome wuu hakin doonaa.
Qaboojiyaha barafka daran wuxuu ka ilaaliyaa barafka barafka. Haddii aysan jirin, ka dibna peat pre-piled ma oggolaan doono geedka in la baabi'iyo.
Ma taqaanaa? Ubax raspberry waxay hoos u eegtaa, sidaas darteed cayayaankoodu waxay u ridi karaan xitaa maalmaha roobaadka.
Sidaas, abuuritaanka dhirta this u baahan tahay ninkii beerta ka shaqaynayay si ay u raacaan xeerarka qaarkood. Kaliya meesha saxda ah iyo daryeelka tayada ayaa kaa caawin doona helitaanka goosashada weyn. Sidoo kale xasuuso in berry bislaado aan la kaydin in ka badan laba maalmood, sidaas u isticmaal beergooyska sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaan ku hawlanahay sii kordhaya raspberry Hercules dayactirka iyo iibinta dheriga cagaaran iyo geedo cusub oo la qodayo ee noocyada kala duwan. Fasalka si buuxda ayaa ugu qanacsan. Berry waa mid aad u ballaaran, baadiyaha uma baahna taageero. Kala duwan waa mid sarreeya. Waxaan u tixgelinayaa sida ugu weyn ee ka hortag badan ee caabuqa cudurada musqusha, iyo sidoo kale tayada ilaalinta fiican iyo gaadiidka of berry. Qolka qaboojinta, mararka qaarkood waxay socotaa 3-4 maalmood iyadoon la arkayn luminta muuqaalka. Dhibaatooyinka, waxaan awoodaa inaan ka baxo laf-dhabarka laanta, laakiin ma tixgelin karo tani inay tahay dhibaato weyn. Guga Tani waxaan qorsheynayaa inaan meel dhigo fasalka xagaaga Glen Fine.